चरिकोट बजार भूकम्पको उच्च जोखिममा, जिल्लामा २० हजार घर ठडिए - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ ०३, २०७५ 1377 ऊर्जा खबर/दोलखा
भूकम्प गएको ३ वर्षमा दोलखामा २० हजारभन्दा बढी घरको पुनर्निर्माण पूरा भएको छ । जिल्लामा विभिन्न गैर सरकारी संघ–सस्था तथा सरकारको पहलमा उक्त परिमाणका घर निर्माण भएका हुन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला शाखा दोलखाका अनुसार घर निर्माणले अहिले तीव्रता लिएको छ । जिल्लामा अहिलेसम्म २० हजार १ सय ४ वटा घर निर्माण भएको जिल्ला शाखा दोलखाका प्रमुख सागर अर्चायले बताए ।
जिल्लामा पहिचान भएका ६२ हजार ८ सय ३३ घरमध्ये हालसम्म ६० हजार २ सय ३० जनासँग अनुदान सम्झौता गरिएको छ । जसमा पहिलो किस्ता ५७ हजार ४ सय ४०, दोस्रो किस्ता ४० हजार ९ सय १७ र तेस्रो किस्ता १९ हजार ९ सय ३६ जनाले पाएको उनले बताए ।
भूकम्पीय जोखिममा दोलखाको चरिकोट बजार
जिल्ला सदरमुकाम चरिकोटका अधिकांश घर अहिले पनि भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको प्राविधिकहरू बताउछन् । भूकम्पले क्षति पुगेका धेरै घर रेट्रोफिट गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन ।
प्राविधिकको सुझाब नलिई सामान्य मर्मत गरेर बसेकाले जोखिम नहटेको प्राविधिकको भनाइ छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति भई रेट्रोफिट गर्नुपर्ने चरिकोटका अधिकांश घरमा प्राविधिक सुझाव पालना भएको छैन ।
मानिसको अत्याधिक चाप हुने अस्पताल, कार्यालय तथा संघ–संस्था र होटल राखिएको छ । भीमेश्वर नगरपालिकालाई भूकम्प मापन केन्द्र (एनसेट) ले दिएको तथ्याङ्कअनुसार नगरपालिकाभित्रका ६ हजार २ सय ६२ घरमध्ये ६७ प्रतिशत पूर्णरूपमा नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ ।
बजारका १४ प्रतिशत रेट्रोफिट गरेर बस्न मिल्ने, १५ प्रतिशत सामान्य मर्मत गरेर बस्न मिल्ने र ४ प्रतिशतमा कुनै पनि क्षति नपुगेको इन्जिनियर सुरेश राउतले बताए । पूर्ण नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने घरमा अधिकांश ढुङ्गा माटो रहेको र रेट्रोफिट गर्नुपर्ने १४ प्रतिशतमा अधिकांश आरसिसि घर रहेको उनको भनाइ छ ।